आँशु भित्र लुकेको साहस
नवलपुर , साउन २४ ।
हामी जो कोहीलाई पीडा हुन्छ पीडामा हामी भक्कनीन्छौं , आँखाहरु त्यसै रसायर आउँछन् सायद हामी त्यसैलाई आँशु भन्छौ । कहिलेकाहिं यस्तो लाग्छ यो आँशु नहँुदो हो त जिन्दगी कति सुखी हुँदो हो । हुन त म आँशुलाई मानवीय संवेदनासँग जोड्छु सायद हामीले त्यत्तिकै पनि आँशु खसालेका हुन्छौं । त्यो आँशु हाम्रो जीवनको लागी कमजोर सावित नै हुन्छ त ! कोहीले परीवारको महत्वपूर्ण सदस्य गुमाउँदा कत्ति आँशु खस्ला ? तर केही गरे पनि भन्न सकिदैंन अवेक्त आँशुको कथा ।
जब जब हामी कमजोर बन्न थाल्छौं आँशु जिन्दगीमा हाबी भएर आउँदो रहेछ । थाहा छैन समाजले आँशुलाई कसरी मूल्याकन गर्छ । एउटा सामान्या परिवारले आफ्नो सन्तानको इच्छा आकङ्छा पुरा गर्न नसक्दा के त्यो परिवारमा आँशुले साहास बदल्न सक्छ ,के त्यो परिवार खुसी देखाएर हास्न सक्छ । हामी दिन सक्छौ त केवल सान्तोना ।
सान्तोनाले थम थमउँदा अलि कति आँशुको मूल्य थाहा हुँदो रहेछ । जब जब जिवनमा असहज र अप्ठारो दिनहरु आउँछन् विगतका खुसीहरु सम्झनु बाहेका अरु केहि विकल्प रहदैंन । सायद यहिबेला हुन्छ आँशु हाबी हाम्रो जिवनमा विगत पनि तितो भएर आउँछ सम्हाली नसक्नु हुनछ । खै कँहा निर भेटिन्छ साहस पत्तै हुदैंन । मलाई लाग्छ जिवनमा अहिले अध्यारो छ ।अध्यारोलाई हटाएर खुसी हुन खोजे पनि मन कहाँ मान्दो रहेछ र । सायद विगतको खुसी हाबी भएर अनायासै आँशु बग्छ ।
मानीसको जिवनमा सान्तोना यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ कि थोरै भए पनि पिडा कम बनाउँछ जिवन जिउने थोरै भएपनि प्रेरण दिन्छ । तर जब सान्तोनाको समय अवधि सकिन्छ जिवनमा अध्यारो बाटो बाहेक अरु केही पनि भेटिदैंन सायद यहि बेल धेरै आँशु झर्छ ।
जिवनमा अब कहिल्यै खुसी हुन नसके पनि , देखेका सपना पूरा गर्न आँशुले पक्का जिम्मेवार बनाउँछ । जब आँशु झर्न थाल्छ एक मनले सोच्छ प्रत्येक रुवाइहरुमा साहास भरीनु पर्छ । त्यसैले आफूलाई कमजोर हतियारको रुपमा होइन जिवन जिउने बलियो आधारको रुपमा लिन पर्दे रहेछ । हामीलाई पिडा छ , अप्ठारो छ तर हामी भित्र जिवन जिउने साहास पनि छ । आँशु भित्र लुकेको कमजोरीलाई निर्मुल पार्न साहास निकाल्नु पर्छ ।
आँशु कमजोरीको संकेत होइन यो त जिवनका लागी एउटा मार्गदर्शक हो । आफ्ना सपनाहरुलाई पूरा गर्न झक् झकाउने एउटा दरिलो माध्यम हो । आँशु बगाउनुहोस् मन खोलेर बगाउनुहोस् र कमजोरीलाई आँशु भित्रै बगाउनुहोस् अनि बल्ल आफूले आफूलाई जिवनमा भव्य प्रेम गर्न सकिन्छ ।